Mashiinka korontada ee dhowaan la helay ayaa ah tan ugu naxdinta badan - BGR - TELES RELAY
ACCUEIL » SAYNISKA Cillada korontada ee dhowaan la helay waa tan ugu naxdinta badan ilaa maanta - BGR
Dhamaan xayawaannada aad la kulmi karto intaad ku dhex quusayso roobka Amazon, markaad la xiriirto koronto koronto waxay u badan tahay inuu noqdo kulamada ugu xanuunka badan. Iyagu ma leh sumcad ay ku galaan dhibaatada aadanaha, laakiin haddii loo hanjabo, waxay awood u leeyihiin inay u diraan naxdin daran jirka waxkasta oo ku soo dhowaada.
Hadda, nooc cusub oo la helay, Electrophorus voltai jebiya rikoorka, soosaarida gariir aad u xoog badan marka loo fiiriyo ciladaha kale ee abid soo bartay. Laakiin waxa xitaa ka sii naxdinta badan eel lafteeda ayaa ah xaqiiqda ah in noolahaan aan la garanayn muddo dheer.
Roobka kaymaha Amazon waa gobol aad u wanaagsan sidoo kale waa mid ay ka jecel yihiin saynisyahano. In kasta oo noocyo badan oo aan la garaneyn ay ku nool yihiin kaymaha, xayawaankan cusub ee eel looma loogu talogalay in ay qariyaan. Sida cilmi-baarayaashu ku sharraxayaan maqaal cusub oo lagu daabacay Nature Communications xayawaanku waxay gaari karaan dhererkooda mitirka 8 dhererkooda, taasoo ka dhigeysa inay si fudud wax u arki karaan mar alla markaad ogaatid halka aad fiirineysid.
Taasi waxay tidhi, cabirkeedu maahan waxa keliya ee kalluunka ka dhigaya mid gaar ah; Awooda ay u leedahay inay soo saarto xaddi aad u weyn oo noolaha ah oo aan la jaanqaadi karin nooc kasta oo kale oo Dhulka ah. Noocyada eel korantada mar la yaqaan, Electrophorus Electricus waxay soo saari kartaa ilaa 650 volts, laakiin waa wax aan qiimo lahayn marka la barbar dhigo qiyaasta 860 volts ee ay soo saartay voltai .
Xayawaanku waxay u isticmaalaan awoodooda gaarka ah difaaca iyo sidoo kale ugaarsiga. Shooggu waxay yaabi karaan ugaarsiga si ay u fududaato in la qabto oo, haddii la baqo, waxay ku filnaan kartaa in la dhaqaajiyo kuwa wax ugaarsada, iyaga oo u oggolaanaya in ay si fudud uga baxsadaan.
Meelaha laga helo, waxay soo jeedinayaan tirada ugu badan ee noolaha wali ku jira in laga dhex helo dabiiciga, "ayuu yiri Carlos David de Santana, qoraaga koowaad ee daraasadda, . Intaas waxaa sii dheer, gobolku wuxuu dan weyn u yahay qaybaha kale ee sayniska, sida daawada iyo cilmiga bayoolajiga, taas oo xoojineysa baahida loo qabo in la ilaaliyo oo la ilaaliyo, waxayna muhiim u tahay daraasadaha ku lug leh iskaashiga ka dhexeeya cilmi-baareyaasha reer Brazil. iyo annaga iyo kooxo ka socda dalal kale. kala duwanaanshaha noolaha ee gobolka. "
Isha Muuqaalka: Gerard Lacz / Shutterstock